Magdalena Andersson oo ka hadashey Khadka Teleefanka oo kula hadashey Erdogan
HomeWararka CaalamkaMagdalena Andersson oo ka hadashey Khadka Teleefanka oo kula hadashey Erdogan
May 22, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Photo/Jonas Ekströmer / TT
Waxaa khadka taleefoonka ku wada hadlay Ra’iisul Wasaaraha Sweden Magdalena Andersson iyo Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan , kaasoo cadeeyay mowqifka Turkiga ee ku biiritaanka Sweden ee NATO, xilligaasi oo Erdogan uu dib u cusbooneysiiyay dalabka dalkiisa ee Stockholm.
“Wadahadalku waa calaamad muhim ah oo aan rajaynayno inaan sii xoojinno iskaashiga aan la leenahay Turkiga. gudaha NATO, laakiin sidoo kale iyada oo la xoojinayo wada-hadallada laba geesoodka ah ee ku saabsan la-dagaallanka argagixisada.
Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu Agency, Erdogan ayaa Andersson ugu baaqay inuu joojiyo taageerada siyaasadeed, dhaqaale iyo hub ee Sweden ay siiso ururada argagixisada.
Turkiga ayaa ku andacoonaya in Sweden ay ilaalinayso xubnaha xisbiga shaqaalaha ee Kurdistan (PKK), oo ay Ankara ku tilmaantay argagixiso, waxayna Sweden ka dalbanaysaa in 30 qof ay dalkeeda ka erido. Arrintan ayaa loo arkaa mid muhiim u ah Turkiga si uu u ogolaado xubinnimada Iswiidhan ee NATO.
Waxaana Andersen uu ka sheegay wada-hadalkii telefoonka ee Sabtidii in uu muujiyay dadaalka ay sameeyeen Erdogan iyo Turkiga si ay uga qayb qaataan joojinta dagaalka Ukraine.
“Sweden oo mustaqbalka xubin ka ah NATO waxay gacan ka geysan doontaa amniga Yurub, waxayna noqon doontaa saaxiib wax dhisaya Turkiga iyo xulafada kale,” ayay raacisay.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, arrinta ku saabsan mowqifka Turkiga ee ku aaddan Finland iyo ku biiritaanka Sweden ee NATO ma aha arrin laba geesood ah oo u dhexeysa Mareykanka iyo Turkiga.
Price ayaa intaas ku daray, “Si kastaba ha ahaatee, Aqalka Cad ayaa wadahadallo kula jira dowladda Turkiga, Mareykankuna wuxuu ku qanacsan yahay in la xalliyo khilaafka.